IiCottages eSwan Bay Resort
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguSwan Bay Resort
Yonwabela iNqila yeZiqithi eziyi-1000 kunye noMlambo iSt. Lawrence kwindawo yakho yokugcina ecaleni komlambo!
Khanyisa iholide yakho ngezi zindlu zincinci zinemibalabala ezithiywe ngeziqithi zasekhaya! Nokuba ukhetha ukuba phambili kunye neziko layo yonke imisebenzi okanye ngaphezulu kwiPaki, sinayo le nto uyifunayo. IiNdawo ekuchithelwa kuzo iiholide zaseSwan Bay zibonelela ngokuphila okulula kubahambi abanolwazi kunye nencasa. Susa inkathazo yokukhempisha kwaye uzibandakanye kwi-glamping amava kunye nathi e-Swan Bay Resort.
Ifakwe ngokupheleleyo, iiCottages zinekhitshi eligcweleyo elinezixhobo ezisisiseko; umenzi wekofu, itoaster kunye nemicrowave. Yonwabela isidlo kwindawo yokutyela okanye kwigumbi lokuphumla kunye nosapho kwigumbi lokuhlala ngelixa ubukele umabonwakude okanye usebenzisa iWiFi yasimahla. Sinikezela ngezakhiwo ezininzi ezahlukeneyo zeCottages, kunye nenani kwiqela lakho elichaza iNkosana oyinikiweyo. Ayizizo zonke ii-cottages eziza ne-lofts. I-Cottage nganye ilala kwiindwendwe ezi-2-4.
I-Parkview Cottages (engaphaya kwiPaki) iza negrisi yegesi, umgodi womlilo kunye netafile yepikiniki eneveranda ozikhethelayo. I-Poolside Cottages iza negrill yegesi kunye netafile yepikiniki eneveranda ozikhethelayo. Nceda ungatshayi kwaye ungaqhubi. Izilwanyana zasekhaya zivunyelwe ngentlawulo eyongezelelweyo.
Umbuki zindwendwe ngu- Swan Bay Resort